🥇 ▷ Avengers & # 039; s Avengers: wax kasta oo aan ka ognahay ilaa haatan ciyaarta rasmiga ah ee Avengers waxaa daabacay Square Enix ✅
Avengers & # 039; s Avengers: wax kasta oo aan ka ognahay ilaa haatan ciyaarta rasmiga ah ee Avengers waxaa daabacay Square Enix
Ku dhawaaqidiisa ayaa si lama filaan ah u soo gebogabowday dhammaadka Janaayo 2017. Square Enix wuxuu soo bandhigay horumarka fiidiyowga rasmiga ah ee ciyaarta Avengers Marve, hoos timaadda magaca koodhka Mashruuca Avengers, oo leh Crystal Dynamics iyo Eidos Montreal. Intaa waxaa sii dheer, sanadka soo socda, isla taariikhdaas, waxaa la muujiyay in xubno ka tirsan Navg Dog iyo Ciyaaraha Visceral ay ku biireen shaqaalaha.
Waxay ahayd, si kasta ha noqotee, ilaa ugu dambaysay E3 2019 markii ugu dambayntii aan aragnay Ciyaarta Avengers ayaa la qabtay, nadiifinta qaar badan oo ka mid ah aqoon-darrooyinka aan soo jiidanay muddo laba sano ah. Oo haddaan eegno kalandarka, waxaa jira “kaliya” sideed bilood ka hadhsan kahor iibka. Waxaa la joogaa waqtigii la ururin lahaa macluumaadka oo dhan oo la balaarin lahaa bilaha, joogsiga ugu horeeya ayaa ah Bandhigga Ciyaarta ee Tokyo.
Dabaaldegyo maalintaa goysay A
The Avengers waxaa loogu ballanqaaday si farxad leh maalinta A, halkaas oo xarun cusub oo San Francisco laga furay iyada oo loo yaqaan ‘Chimera helitransport’. Waxaa soo dhoweeyey dadweynaha, ma aysan joojin sawir qaadista dhammaan dadka weydiistay iyada oo ka mid ah tusaalooyin badan oo mahadnaq ah oo laga dareemayo nabdoonaan mahadsanid jiritaanka hoggaamiyeyaashan… Wax walba waxay u muuqdeen inay ku socdaan giraangiraha.
Sikastaba, waxbaa kudhaca buundada dahabiga ee San Francisco. Qaraxyada oo gilgisha Avengers-ka, kuwa si dhakhso leh u taga isla meeshaas si ay u arkaan waxa dhacaya. Waxaa jira Thor, Iron Iron, Hulk iyo Carmallada Madow Waxay ku soo ogaadaan tiro badan oo calooshood u shaqeystayaal ah ilkaha, ilaa tirada Taskmaster (Kuma yaa ku aragnay Marvel’s Spider-man ee Ciyaaraha Insomniac, isha) oo leh bam sonic ah.
Kabtanka Mareykanka wuxuu joogi doonaa gudaha Chimera helitransport ilaa inta ugu xun ay dhacdo: qarax qarxa oo soo afjaraya waxkasta oo ka kooban qaab dhismeedka duulimaadka titanic. Avengers kaliya maaheyn hogaamiyahooda ugu sharafta badan, laakiin qof walbaa wuxuu su’aal waydiiyaa sida ay uga gudbaan geesiyaasha una raacaan tuulooyinka iyagoo aan ilaalinaynin magaalada San Francisco.
Caqli ahaan, tani waxay qayb ka ahayd qorshaha Taskmaster-ka iyo hogaankiisa, oo wali la muujin doono. Waxa aan hubno hubaal waa in, shan sano kadib, San Francisco dib ayaa dib loogu dhisay xakameynta I.M.A. (Fikradaha Mechanical Advanced; ama A.I.M, Ingiriisiga), koox argaggixiso ah oo ay ka soo baxeen tirooyin aad u wanaagsan M.O.D.O.K., xubin bir ah oo loogu talagalay inay wax dilaan. Haatan, haa, waa la xaqiijiyay kaliya Magacaabid.
Oo ka warran kuwa aarsada ah? Waqtigaan la joogo, sheekadiisa, ka dib masiibada masiibada ah ee maalinta A, waxay ku bilaabaneysaa Kabtan Ameerika oo loo maleynayo inuu dhintey iyo kooxda inay la dagaallanto kacdoonka, labadaba sharci darrada ah ee superheroes iyo aragtida sida dunidu mar kale ugu jirto halis weyn.
Faahfaahin aad u cajiib ah oo laxiriirta geerida “Capi” waa astaanta ay Square Enix u sameysay jaaniska ku meel gaarka ah ee ciyaarta, iyadoo ciyaartaas uu ku dhamaan doono qaab 4 ah, oo tilmaamaya luminta Steve.
Avengers Marvel, kabaha iyo qaabka ciyaarta
Sida aan ku ogaanay furitaankiisii ​​carwada Los Angeles sanadkan, Avengers Avengers ma yeelan doono wajiyada jilayaasha iyo jilayaasha kuwaas oo ku duubi fagaarahaas shaneemo., laakiin Square Enix wuxuu doortay wax kale oo ka dhaqaale badan oo lagu dhaqmi karo dadka kale:
Troy Baker (Hulk)
Laura Bailey (Carmal Madow)
Waxaan ognahay in adduunka guud ahaan tiradaasi Dr. Henry Pym iyo jiritaanka Kamala Khan sidoo kale ma maqnaan doono (Ms. Marvel) ballanta. Weli wax badan ayaa jira oo arrintan lagu muujinayo, laakiin Square Enix ayaa caddeysay inay imaan doonaan geesiyaal dheel dheeri ah mustaqbalka iyo taas wax bixin ma jiri doonaan.
Ujeeddadiisu waa inuu abuuro mashruuc la mid ah Destiny, oo ah ciyaar sii kordheysa dhowr sano, marka laga reebo xaqiiqda jirta waxa ku qorani waa bilaash. Haa, waxaa jiray khilaaf, si kasta oo ay ahaataba, in la ogaado in ay jiri doonaan micropayments arrimaha la isku qurxiyo, in kasta oo aan si fudud uga furfuri karno waxyaabahaas annaga oo ciyaar iyo xoogaa dadaal ah. Ma jiraan wax halis ah, hadda.
Dhawaan ayaa la xaqiijiyay, tusaale ahaan, in Hulk uu soo bandhigi doono dharka ‘Grey Hulk’, oo leh taabashadaas gaangiska ah, si loo furo. Xaqiiqdii, geesiyaal kastaa wuxuu yeelan doonaa dhar kaladuwan oo mid ka mid ah baatooyinka dabaqa ayaan awoodnay inaan ku aragno Iron Man meel banaanka ah Iyada oo mid kale ah.
Oo muxuu noqon karaa? Waxaad dhihi kartaa inay waxoogaa la wadaagto qaabkii hore ee quruxda badnaa ee Batman Arkham ee Rocksteady Studios, in kasta oo waxa lagu muujiyay ciyaarta ciyaarta Hordhackeeda ma uusan adeegsanin si loo ogaado inta ay noqon doonto qoto dheer arrimaha ka hortagga weerarada, ciribtirka ama xirfadaha.
Haa, waxaan yeelan doonnaa geed xirfad leh oo loogu wanaajiyo mid kasta oo ka mid ah Avengers-ka, iyadoo laxiriirta ololahaaga, waxaan ognahay in sheekadaada ayaa kaliya la ciyaari karaa adoo haysta hadafyo gaar ah oo gaar u ah geesiyaal kasta. Oo taas waa in isaga hab iskaashi on-line afar qof (ka reebna heerka sare ama qaababka kale ee ciyaarta) geesiga laguma celin karo si uusan u jabin wadashaqeynta.
Taariikhda sii deynta, qiimaha iyo halka ay ka imaan doonto
Avengers Marve soo socdaa 15-May-2020 PC, PS4, Xbox One iyo Stadia, oo awood u leh inay kaydsadaan 49.99 euro kombuyutarka iyo 62.90 euro marka loo eego consoles. Haatan ma jiraan wax daabacado gaar ah ama aruuriyayaal la shaaciyey.
Haa, waxay lahaan doontaa beta, iyadoo leh helitaan hore PS4, laakiin Square Enix weli ma aysan cadeyn goorta ay dhici doonto. Waanu cusbooneysiin doonnaa markasta.
Ration of videos of Marvel’s Avengers
Bog rasmi ah | Avengers Marve